qoraalada rakibo ee ahama bamka culus multistage - Shiinaha Shanghai SOG Bamka
Notes The Rakibaadda for ahama Steel Multistage qaybin saar:
1. Laga bilaabo ahama technology bamka rakibo culus ee ka multistage, iyo biibiilaha nuugid u baahan yahay xaalad adag shaabadda, ma yeelan karaan dillaac ama biibiile ama baxsiga, haddii kale wuu wada baabbi'in doonaa degree vacuum at tubada biyaha bamka ah, keeni soo saarka biyaha bamka waa hoos, ama aad u daran doonaa inay biyo dhaansato. Sidaa darteed, waa in aan dadaal ku sameeyo shaqo fiican in interface dhuumaha si loo hubiyo tayada dhismaha xiriir dhuumaha.
2. Waa in la tilmaamay in markii madaxa iyo heerkulka biyaha ee bir ah ahama bamka culus multistage iyo dhuumaha culus ee loo xirxiro bamka waxaa laga shuruudaha tijaabo oo kala duwan, haddii quruxsan maxalliga ah waa in ka badan 300 oo mitir ama heerkulka biyaha gareeyeen ka badan 20 degrees Celsius, qiimaha xisaabiyaa la saxo doonaan. Taasi waa, cadaadiska Hawada ee sarreeya kala duwan iyo cadaadiska uumiga cokan kor ku heerkulka biyaha ee 20 degrees Celsius.However ah, marka heerkulka biyaha waa ka yar 20 degrees Celsius, cadaadiska uumiga cokan noqon kartaa dayac badan.
3. Si loo xaqiijiyo height bamka rakibo (ie nuugid). height Tani waxa ay tilmaamaysaa bareeg u taagan u dhexeeya dusha biyaha iyo xarunta-line of impeller bamka. waa in aan lagu khaldin sarajooggiisuna nuugid ogolyahay. height The vacuum oggol yahay buugga aayahiisu sheyga bamka biyaha ama nameplate muujinaysaa qiimaha vacuum qaybta tubada ee bamka biyaha ah. Waxaa lagu qiyaasay by joojinta tijaabo ah cadaadis Hawada caadi ah iyo heerkulka biyaha ee 20 degrees Celsius ah. Waxa aanu ka feker socodka biyaha ka dib markii biibiile nuugid la isku aadiyo. height of unit bamka waa in ay ahaataa qiimaha degaanka hartay ka dib markii jidaynayey height vacuum in la jaro ka dib markii khasaaraha ka mid ah line nuugid biibiilaha nuugid ah. height of unit bamka kama badan karto qiimaha xisaabiyaa. Haddii kale, bamka biyaha uma soo shubo doonaa.
4. Saamaynta qiimaha xisaabiyaa waa madaxa -loss ay sabab u tahay iska caabin iyo biibiilaha biibiilaha nuugid ah. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in ay qaataan qorshaha ugu gaaban tuubooyin iyo rakibi rakiban xusulka ka badan inta suurtogalka ah. Sidoo kale waa hubaal in ay haboon diyaarin tuubooyinka la calibers qaar ka mid ah si loo yareeyo heerka socodka ee tuubooyinka.